uMembeso (isigaba emshadweni wesintu) – iAfrika
Ukulobola nomembeso noma izibizo izinto ezahlukene noma abantu babuye baziphambanise. Kwesinye isikhathi umuntu ukhuluma ngokulobola kodwa inkulumo yakhe yona ibe ichaza umembeso, noma akhulume ngomembeso kodwa ebe eqonde ukulobola. Kuyenzeka umembeso uhambisane kanyekanye nokulobola noma ukulotsholwa, kodwa ke akusiwona umgomo lowo noma impoqo ngoba phela kuya ngamandla omuntu. Ngaphambi kokuba senabe kakhulu ngendaba yalesisihloko esikhuluma ngaso kanye nezigaba zomgcagco wesintu, kuhle ke sichaze kancane ukuthi uyini umehluko phakathi kokulobola kanye nezibizo noma nomembeso.
Umehluko: ilobolo nomembeso
Ngamafuphi Ilobolo yilapho khona umkhwenyana ekhipha izinkomo eziyisa kubo kwengoduso yakhe, kodwa ke ngoba izinto sezishintshile kwesinye isikhathi akusabi yizinkomo njengasemandulo, kodwa nenkece isiyasetshenziswa uma kulotsholwa. Kanti ke umembeso wona yilapho umkhwenyana ehambisa izipho kumkhwekazi wakhe embonga ngokumkhulisela indodakazi le esekuyingoduso yakhe.
Umndeni wakubo kwamakoti lo osuke ezogana ubhala phansi izinto noma izipho ezizothengwa umkhwenyana ezithengela umembeso. Lezizipho ezibhalwe phansi zihambisana nencwadi enamagama abantu abazothola izipho. Lawo magama abhalwa aphinde anamathiselwe kuzo izipho ngasinye ngasinye ukuze kwaziwe ukuthi ngubani umnikazi wasiphi isipho. Ngokujwayelekile ke lezizipho ziyingxubevange yamacansi, amaphinifa ayizembatho, izimpahla zokugqoka, ukudla kanye nokunye okuningi njengoba phela abanye bebhala izipho ezinhlobonhlobo ezifiswa yibona. Uma sekuhanjiswa izibizo lezo, ziphelekezelwa imbuzi.
Okwenzeka ngosuku lomembeso
Ngaphandle kokuthi kusuke kunezipho ngelanga lomembeso, lolusuku luhlanganisa imindeni yomibili lwakhe ubudlelwano. Ngaphambi kokuthi bangene ebaleni laba abasemzini abalethe izibizo, bahlangatshezwa abakubo kwamakoti esangweni bekikiza bebhikla, ngesikhathi esifanayo nabo abakwamkhwenyana basuke bevuma ingoba yakulomuzi abasuka kuwo, njengoba phela umuzi nomuzi unemvunge yakhona eculwayo uma kunemicimbi. Kanti ke ngaphambi kokuthi bangene egcekeni abakwamkhwenyana, baqale bacele ukungena emagcekeni akulomuzi abeze kuwo. Isicelo leso siphuma ngezwi lomkhongi omkhulu ehambisana nomncane ongumelekeleli wakhe njengoba kukhonga abantu ababili nje. Umkhongi lowo belu uyabe esesho ukuthi beze ngani kulomuzi abafikele kuwo, okuwukuletha izibizo lezo abasuke bezithwele.
Kuhlatshwa lembuzi abafike nayo abakwamkhwenyana ilungiselelwe ukuthi izodliwa ngabasemzini, okuthi ngalesosikhathi isahlatshwa kube kwabiwa ngapha egcekeni, kwabiwa zona lezizipho abafike nazo abakubo kwamkhwenyana. Kwezinye izigodi ngosuku lomembeso abakubo kwentombi bahlaba izimbuzi ezibizwa ngokuthi ngamakhambi, lezizimbuzi kuhlatshiswa ngazo abakubo kwamkhwenyana abasuke bemukelwa ngazo wumndeni wakubo kwamakoti.
Umsebenzi wokwaba wenziwa womama abadala abasuke behamba nezinsizwa kanye namantombazane ngalelolanga lomabo. Abakubo kwamkhwenyana bambesa umakoti wabo bamuphe nezipho ezinhle kanye nomakotshana wakhe. Umkhongi yena uyamkhehla umakoti, okuyilapho umkhongi esuke enikeza khona umakoti izipho aphinde amgcobe khona ngensoyi ngoba phela usuke esezoshada. Abakwamkhwenyana baphinde bambathise umama nezihlobo zikamakoti ngezingubo zokulala, amaphinifa, amaduku, baphinde banenezele ngezipho zezitsha, amabhodwe nezinto zetiye. Ubaba kamakoti yena umbathiswa ngejazi, isigqoko, isambulela kanye nemvubu. Noma ziziningi izigaba okudlulwa kuzo ngaphambi kokuthi kufikwe esiphethweni okuwumgcagco, umembeso akusona ke isigaba sokugcina.
Amadlozi Amakhambi Amakhaya Amalobolo Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Impepho Izaga Izibongo Izigodi Izilwane Izinkolelo zesintu Izintelezi Izinyoni Izisho Shembe Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukugeza Ukuhlanza Ukukhulelwa Ukulobola uMabo uMembeso Umemulo Umsamo Umshado Utshwala